कुलुङ, भोजपुर। उत्तरी भोजपुरमा बर्षौं देखी प्रसिद्ध माघे मेला यसपाली विगतझै भब्य तथा सभ्य तरिकाले सम्पन्न भएको छ।
बिगत २० सौं बर्षदेखी सिंगो भोजपुर जिल्लाकै शैक्षिक केन्द्र भनेर चिनिएको कुलुङ र यहाँ संचालित वीरेन्द्र मा बि मानिसहरुको मन मनमा गढेर बस्न सफल भएको विध्यालय हो। बिगतमा जिल्लास्तरीय खेलाईने वीरेन्द्र शील्ड पटक पटक यहाँस्थित वीरेन्द्र माबिले जित्थ्यो। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि वीरेन्द्र शील्ड खारेज भएपनि भलिबलमा जमेको त्यो क्रेज गाउँ गाउँमा फैलियो। हिजोआज भोजपुरका प्रत्येक गाउँठाउँमा बिभिन्न भलिबल प्रतियोगीताहरु आयोजना हुने गरेका छन्। तरपनि कुलुङको माघे मेला र यतिबेला खेलाईने भलिबल प्रतियोगीताको आफ्नै उचाई र महत्व छ।
बिगतझै यसपाली पनि पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतिस्पर्धा भए। साकेला नाचिए अनि वल्लोपल्लो गाउँका पुराना दौतरीले सम्बन्धहरुलाई पुनर्ताजगी गर्ने मौका पाए। युवा युवतीले अफ्नो परिचय अरु बढाउने मौका पाए। नामै मेला। 'मेलामा अलिअलि झेला' नेपाली समाजमा चलि आएकै चलन हो।
यस बर्ष पुरुष भलिबलतर्फ प्रथम भएर षडानन्द नगरपालिका-१, नेपालेडाँडाले नगद रु. ६०,६६६ सहित रनिङ शिल्ड उचाल्यो। कुलुङ खेलकुद बिकास समितीले आयोजना गरेको खेलमा संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिकाले द्वितीय स्थान हाँसिल गरी नगद रु. ४५,५५५ मेडल र प्रमाण पत्र हात पार्यो। स्थानिय पर्शुराम राई ( कुलुङ्गे राई कान्छो ) ले दोबाटो न्यूजलाई जानकारी दिए अनुसार संखुवासभाकै पाँचखपन नगरपालिकाले त्रितीय स्थान हासिल गरी नगद रु ३५,५५५ मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको यो खेलमा सान्त्वना पुरस्कार साल्पासिलिछो गाउँपालिका- १ कुलुङले प्राप्त गर्न सफल भयो ।
खेलमा पुरुषतर्फ बेस्ट स्पाईकरमा साल्पासिलिछो-१ का अमिर थापा चुनिए भने बेस्ट डिफेन्डरमा षडानन्द नपा-१ का बिपुल कार्की घोषित भए। सर्बोत्कृष्ट खेलाडीमा षडानन्द नपा-१ का बिबश लिम्बू चयन भए।
महिलातर्फको भलिबलमा आफ्नो उत्क्रिष्ट खेल प्रदर्शन गरेर षडानन्द नगरपालिका-३ खार्ताम्छा प्रथम भयो। संखुवासभाको सिलिचोङ-१, शिसुवाखोलाले द्वितीय स्थान हाँसिल गर्यो भने भोजपुर साल्पासिलिछो-५, दोभाने तृतीय भयो। प्रतियोगीतामा भोजपुर साल्पासिलिछो-३, चौकीडाँडाले सान्त्वना पुरस्कार थाप्यो।
खेल समारोहका प्रमुख अतिथी साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश राई लगायतले बिजयी खेलाडी टीमलाई शील्ड, मेडल तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रममा विशेष अथितीहरु षडानन्द नगरपालिका मेयर बिरबल राई, उप-मेयर मेरिका राई, पूर्व राज्यमन्त्री पदम राई लगायत अन्य गन्यमान्य ब्यक्ति ब्यक्तित्वको उपस्थिती थियो।